2010 ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူမှ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ ကြေငြာချက်မှ စတင်၍ နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံအသိုက်အဝန်းသည် သုတေသန၏ နည်းစနစ်နှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ အတည်ပြုကြောင်း သေချာစေရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီး၊ အသစ်အဆန်းအတွက် အပြိုင်အဆိုင် ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသော ယုတ္တိဗေဒကို နိဒါန်းပျိုးသည့် အခြေအနေတွင်၊ ပျံ့၏။ ထို့အပြင်၊ စည်းမျဥ်းများ အားကောင်းလာစေရန်နှင့် လူမှုတာဝန်ဝတ္တရားများ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို သိပ္ပံနည်းကျ သမာဓိရှိမှု၏ အခြေခံမူများကို အသိပညာနှင့် သင့်လျော်မှု ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
Les différents organismes de recherche en France ont multiplié les initiatives et leur convergenceaconduit à la signature de la charte de déontologie des métiers de la recherche par la CPU (Conférence des Présidents d’Universités) et les principaux organismes en janvier 2015. A la suite du rapport remis par le Pr. Pierre Corvol en 2016, “Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique”, plusieurs décisions ont été prises, notamment :
les écoles doctorales doivent veiller à ce que les doctorants bénéficient d’une formation à l’éthique et à l’intégrité scientifique,
les établissements ont nommé un référent à l’intégrité scientifique,
un Office français de l’intégrité scientifique (OFIS)aété installé en 2017 auprès du HCERES.
Engagée dès 2012 sur cet enjeu avec l’adoption d’une charte, l’université de Bordeaux a, en partenariat avec la CPU, le COMETS-CNRS, l’INSERM et l’INRA, développé la formation sur l’intégrité scientifique que nous vous proposons sur FUN. Bénéficiant du soutien de l’IdEx Bordeaux et du Collège des écoles doctorales, cette formationaété conçue avec la Mission d’appui à la pédagogie et à l’innovation (MAPI) de l’université de Bordeaux.
ဖတ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကြောင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
Cette formationaété suivie par les doctorant.e.s de l’Université de Bordeaux depuis 2017 et par d’autres établissements depuis 2018. Elleaété introduite comme MOOC sur FUN à partir de novembre 2018. Près de 10.000 apprenant.e.s se sont inscrit.e.s chaque année aux deux premières sessions (2018/19 et 2019/20). Parmi les 2511 apprenant.e.s ayant répondu au questionnaire d’évaluation de la formation lors de la dernière session, 97% l’ont jugée utile et 99% estiment avoir acquis des connaissances nouvelles.
သုတေသန လုပ်ငန်းများတွင် သိပ္ပံပညာ ခိုင်မာမှု ဒီဇင်ဘာလ 13, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သောနယ်မြေများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော SCIC ၊
အောက်ပါအားလုံးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု- ရဲရင့်ပြီး အောင်မြင်မှု
ကာလရှည်စာချုပ် - စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အချိန်တွင်ယာယီတိုးခြင်း၏အဖြစ်မှန်ကိုသက်သေပြပါ
ရေကဏ္ectorသည် "အလုပ်အကိုင်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု" လေ့လာမှုတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထုတ်ဝေသည်။